မတျ 20, 2020 – Healthy Life Journal
နားစည်ပေါက်ခြင်း (Perforated eardrum)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျွန်တော်က ယခု (့)တွင် အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ (၁၃-၃-၂၀၁၁)ကစပြီး နားကိုက်နေပါသည်။ ပထမခံစားရတဲ့နေ့က နားထဲကယားလို့ နားကြပ်တံနှင့် ကြပ်ကြည့်ရာ နားထဲတွင် သွေးများရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် General Hospital သို့ သွားပြရာ နားအကြားအာရုံစစ်ဆေးခြင်း၊ နားစည်အတွင်းသို့ ကင်မရာနှင့်...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသရင် အနာမကျက်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါကကော မှန်ပါသလား ဆရာ။ A. ဆီးချိုရှိရင် အနာမကျက်ဘူး၊ ဆီးချိုမရှိရင် ခွဲလို့မရဘူးဆိုတာလည်း အယူအဆမှားတစ်ခုပါ။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူကို ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေက ခွဲမယ်ဆိုရင်...